Android trivia: mibvunzo gumi yekuyedza kuti unoziva sei google & apos; s mobile operating system
Kuru Nhau & Ongororo Android trivia: mibvunzo gumi yekuyedza kuti unoziva sei Google & apos; s mobile operating system
Android trivia: mibvunzo gumi yekuyedza kuti unoziva sei Google & apos; s mobile operating system
Wanga uchiziva here kuti Android ndiyo nyika & apos; s inonyanya kufarirwa mobile operating system? Uye mugove wayo wemusika wakaramba uchikura, uchisvika mudenga kupfuura makumi masere muzana muzana mumakamuri maviri apfuura, ichisiya Apple ine mugove mudiki weanenge angangoita 12% yeiyo yakazara smartphone uye mamwe ese mapuratifomu anokwikwidza seWindows Foni ine zvidimbu zvidiki muzana. .
Vamwe vangati Android & apos; s mukurumbira imo nekuti yakavhurika sei uye kuti ingani sarudzo yainopa kune vashandisi mumatengo ese emitengo, asi nevashandisi vazhinji kunze uko, unogona kunge uchizvibvunza iwe: ini Android ndinoiziva? Pane imwe nzira yekuwana mhinduro: edza ruzivo rwako nefoniArena Android trivia!
Isu & apos; kukutanga iwe nemibvunzo gumi yekunetseka kwakasiyana: mamwe angave ari nyore kune vateveri venguva refu veApple, nepo vamwe vangakukurudzira kutsvaga webhusaiti yedu neGoogle kuti uwane mhinduro. Mumwedzi mishoma yapfuura isu & maapos tanga tichichera mabhii anonakidza uye zvidimbu zveruzivo nezveGoogle & apos; s mobile operating system, uye vaverengi vedu vakavimbika vachakwanisa kuwana mhinduro yemimwe mibvunzo mune zvimwe zvinyorwa zvedu zvichangoburwa.
Saka pasina imwezve ado, rega & apos; tiende nemibvunzo (iwe unogona kuwana mhinduro nekambori kadiki shure chaiko mushure memubvunzo wega wega):
1. Usati watengesa kuGoogle, Android co-founder Andy Rubin akaedza kutengesa system yekushandisa ku ...?
Usati watengesa kuGoogle, Android co-muvambi akaedza kutengesa iyo inoshanda sisitimu ku:
Iyo yekumashure nyaya:Iyo Android timu, inoumbwa nevanhu vasere kumashure panguva iyoyo, ichinge yabhururuka kuenda kuSeoul, Korea, yawana musangano wekutanga nemumwe weavaigadzira mafoni nguva iyoyo, Samsung. Yakakomberedzwa nevakuru makumi maviri veSamsung, Rubin anodzika iyo Android pfungwa asingaregi, asi pachinzvimbo chekuda uye mibvunzo, mhinduro chete yaanowana kunyarara kwakafa. Ipapo, timu yeSamsung yevakuru-vepamusoro vatungamiriri vanotaura izvo zvaiita sezviri pachena panguva iyoyo: ''Iwe neuto ripi richaenda nekugadzira izvi? Une vanhu vatanhatu. Wakakwirira here? ’Ndizvo chaizvo zvavakataura. Vakandiseka kubva muboardroom. Izvi zvakaitika mavhiki maviri Google isati yatitenga, ”Rubin anoyeuka gare gare.
2.Google yakabhadhara zvakadii kuwana Android?
Google yakabhadhara zvakadii kuwana Android?
Mhinduro chaiyo:$ Miriyoni makumi mashanu
Iyo yekumashure nhoroondo:Mukutanga kwegore ra2005, Larry Peji angabvuma kusangana naAndy Rubin, uye mushure mekunzwa nezve rake basa paApple, haangobatsire chete kuwana mari iyo mari-ine nzara yeApple OS chirongwa chinoda - anofunga kuti Google ichawana Android. Iko kunzwa kwekuti nharembozha yaifanirwa kuchinja yave kutokanganisa Google & apos; s vavaki, uye muMountain View Larry Peji naSergey Brin vanga vachitsvaga shanduko iyoyo kwechinguva, kunyanya vachinetsekana kuti inogona kunge iri hofori hombe Microsoft iyo ndichatanga kusvika ikoko. Neraki, Rubin akauya panguva yakakodzera. Google yakatenga Android yeinosvika madhora makumi mashanu emadhora uye zvinokurudzira panguva iyoyo, uye nepakati pa2005 timu-yevatatu ye-Android timu yakaendeswa kuMountain View.
3.Andy Rubin, baba veAroid, vane shungu dzekuda kune imwe nzvimbo yakasiyana neanoshanda masystem. Ndeipi yacho?
Andy Rubin, iye munhu akatanga kick Android, anofarira zvakanyanya munzvimbo yakasiyana neanoshanda masystem. Ndeipi yacho?
Iyo yekumashure nyaya:Kwete madiki mascots egirini, funga iwe, asi iyo yekumaindasitiri uye yekuchengetedza nguva mhando iyo inosunungura vanhu kubva kumaketani ekudzokorora kudzokorodza kana kuendesa zvigadzirwa, uye inogona kuita isina-brainer mabasa senge ma sensors anotanga yako windshield wipers kana mvura ikadonha.
4. Yekutanga zvizere makumi matanhatu nenomwe-inoenderana vhezheni ye Android ndeye ...?
Yekutanga zvizere makumi matanhatu neshanu inoenderana vhezheni ye Android ndeye?
Mhinduro chaiyo:Android 5.0 Lollipop
Iyo yekumashure nhoroondo:Kuti uve nepuratifomu yakazara ye-64-bit, Google yaifanira kuunza nguva nyowani yekumhanya. Izvi zvinoitika kuti yava kunzi ART (iyo Android Runtime), uye nepo ichivepo senge sarudzo mu Android 4.4 KitKat, inotsiva dated Dalvik zvizere chete mu = Android vhezheni 5.0 Lollipop.
5. Yekutanga misa-musika Android smartphone yaive ...?
Yekutanga misa-musika Android smartphone yaive
Mhinduro chaiyo:T-Nhare G1
Iyo yekumashure nyaya:Google ndiyo yakakurumidza kuona ruzivo rukuru rweApple & apos; s iPhone chiziviso, uye zvinonzi zvakakanda mukuyedza kukuru kuvhura Android munguva pfupi yapfuura Apple & apos; s kuburitswa. Google yakatora T-Mobile semutakuri wayo wesarudzo, uye iyo HTC Kurota, aka T-Mobile G1, yaive yekutanga ruoko rweApple kupinda mukati mavanhu nemaoko.
6. Tsigiro yemakirabhu emakirabhu senge SwiftKey yakagoneswa mu = Android vhezheni ...?
Tsigiro yemakirabhu emakirabhu senge SwiftKey yakagoneswa mu Android vhezheni
Mhinduro chaiyo:Android 1.5 Mukeke
Iyo yekumashure nyaya:Google yakavhura yekutanga Android foni, iyo HTC Kurota, ine yepanyama, inotsvedza-kunze QWERTY keyboard, uye haina kutsigira chero chaiwo mabhatibhodi pakutanga. Munguva pfupi, kambani yakunda kutya kwayo kwekuti chaiwo makirabhu haana kukwana zvakakwana, uye ndokuwedzera yayo nerutsigiro rweimwe nzira, yechitatu-bato kirabhu mu Android 1.5 Cupcake.
7. Chimwe chezvikonzero chikuru nei madivayiri eApple achida yakawanda RAM ndangariro ndeye ...?
Chimwe chezvikonzero chikuru nei maApple madivayiri achida yakawanda RAM ndangariro iri
Mhinduro chaiyo:Java & apos; s anotakura marara
Iyo yekumashure nyaya:Pamwe chete nekushandiswa kweJava kunouya maitiro anonzi kuunganidzwa kwemarara. Kamwe mushandisi weAroid paakavhara app, iyo nzira yekuunganidza marara inodzokorora ndangariro. Dambudziko nderekuti vanotora marara vanoda kanokwana kana kasere ndangariro yavari kushandisa kuitira kuti basa riitwe nekukurumidza. Kana huwandu hunodiwa hwekurangarira husingawanikwe, zvinhu zvinodzikira. Nekuti iOS haishandisi vatakuri vemarara, Apple inogona kuenda nekuisa 1GB ye RAM mu iPhone, uye inowirirana kana kupfuura mashandiro efoni dzeApple.
8. Tsigiro yemaruva emepikicha yakagoneswa mu Android vhezheni ...
Tsigiro yemararamiro emepamoyo yakagoneswa muApple vhezheni
Mhinduro chaiyo:Android 2.1 Eclair
Iyo yekumashure nyaya:Chimwe chezvinhu zvikuru kwazvo zvitsva zveiyo Android 2.1 kuburitswa kwaive mapikicha. Iyi yakasarudzika tsika yekugadzirisa yaive chiratidzo chakatarwa kare ikako, asi chakanzwa kuyedza uye mazhinji echitatu-bato rechitatu mhenyu mapikicha aive nemhedzisiro mukuita kwemidziyo yehertz-yakatemwa yenguva yacho. Zvakadaro, yakashanduka zvakanaka, uyezve, mapikicha ararama, inoramba iri sarudzo yekugadzirisa iyo isingatsigirwi zvakazara kusvikira nhasi nechero imwe sisitimu inoshanda.
9. Yekutanga Android piritsi yaive iyo ...?
Yekutanga Android piritsi yaive iyo ...
Mhinduro chaiyo:Samsung Galaxy Tab
Iyo yekumashure nhoroondo:Mushure meApple & apos; kuburitswa kweiyo iPad kutanga kwegore ra2010, vagadziri vefoni vakagashira Android vakazviwana vamhanyisa: vaifanira kuwana mhinduro. Yekutanga yakatengeswa zvakanyanya tablet yeApple, zvisinei, yakangosvika mukupera kwa2010, uye yakanga isina kuita senge hombe, 9.7-inch iPad. Yaive iyo Samsung Galaxy Tab, uye yaive nehukuru hwehomwe uye 7-inch screen.
10. Vazhinji vanoti Android ine 'chokwadi' multitasking zvakasiyana nemamwe mapuratifomu enhare, asi ndeyipi vhezheni yaive multitasking inogoneswa?
Vazhinji vanoti Android ine 'chokwadi' multitasking zvakasiyana nemamwe mapuratifomu enhare, asi ndeyipi vhezheni yaive multitasking inogoneswa?
Mhinduro chaiyo:Android 1.0
Iyo yekumashure nyaya:Multitasking yakavakwa mumidzi yeiyo Android, uye yakashanda kunyange kunyangwe vhezheni zvisati zvaburitswa neruzhinji, sekutanga kuburitswa 'Milestone'. Nekudaro, kana isu & apos; tichitarisa kuburitswa neruzhinji chete, Android 1.0 ndiyo ichave iyo chimiro chakaita dheti yayo yechokwadi kuruzhinji.
yakapihwa kana zvadaro nzira yekutambira
sei kuwana imei nhamba
Kuremadza 5G pane yako nyowani Verizon iPhone kunogona kunyatso ita kuti ikurumidze
Ngwarira makadhi ekunyepera e MicroSD! Heano maapos ekutaurira kwekunyepedzera kubva kune yekutanga
Usatenge foni yakachipa
Gyroscope maapplication nemitambo
Yakanakisa ekuvharira skrini ye iPhone 7 uye iPhone 7 Plus
AT & T neVerizon vanova vanobatana zvisingaite muhondo ye5G kurwisa T-Mobile
Maitiro ekugadzirisa iyo yazvino maapplication bhatani lag muTouchWiz pane iyo Galaxy Note 4